A new era for Delta Airlines and Korean Air: Boston to Seoul an aviation first | Airline News
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeenqwelo moya » Ixesha elitsha leDelta Airlines kunye noMoya waseKorea: IBoston isiya eSeoul ngenqwelomoya kuqala
Iindaba zeenqwelo moya • Iindaba zesikhululo senqwelomoya • Iindaba zeNdibano zeAndorra • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • South Korea iindaba zokuhamba • Iindaba zothutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iindaba zeWired Travel
Ixesha elitsha leDelta Airlines kunye noMoya waseKorea: IBoston isiya eSeoul ngenqwelomoya kuqala
Agasti 6, 2018
Intsebenziswano entsha iyaqhubeka phakathi kweKorea Air kunye neDelta Airlines, kwaye iBoston inendima enkulu kuyo.
Inkonzo entsha engapheliyo phakathi kweBoston neSeoul iza kuphehlelelwa nge-12 ka-Epreli 2019 ngentsebenziswano neqabane elidibeneyo, iDelta Air Lines.
Inqwelomoya entsha yeBoston, kunye neMinneapolis / St. Inkonzo kaPaul-Seoul eziswa yi-Delta kwi-2019, zizongezelelo zokuqala kuthungelwano lwentsebenzo yenethiwekhi yaseSeoul-Incheon okoko aba baphathi babini basungula ubudlelwane babo ngoMeyi.
"Ngokudibanisa iishedyuli zoMoya waseKorea kunye neDelta, abathengi bethu bayakwazi ukonwabela iindlela zokuhamba ezingenakuthelekiswa nanto," utshilo uJohn Jackson, usekela-mongameli olawulayo waseKorea Air. "Indibaniselwano yethu ayinakuphikiswa ukuba yeyona ntsebenziswano yomeleleyo kwaye inika zombini iinqwelo-moya zethu ukhuphiswano oluqinileyo."
Abathengi banokufikelela kwiindawo ezingama-290 kwiDelta eMelika kunye neendawo ezingama-80 eAsia kuKorea Air. KuloJanuwari uphelileyo, isiKorea kunye neDelta babambisene kumzi-mveliso okhokelayo we-Incheon Terminal 2, esenza unxibelelwano phakathi kweAsia neMelika lolona shishino lukhawulezayo.
"Njengesango eliphambili lamashishini obuchwephesha obuphezulu, iBoston yeyona ndawo ithandwayo engagcinwanga evela eKorea enemfuno ekhula ngokukhawuleza eAsia," utshilo uJackson waseKorea. "Isixeko, kunye neeyunivesithi ezininzi kunye neekholeji, yindawo ekhulayo ye-England entsha etsala iinkampani kumashishini akhula ngokukhawuleza njenge-IT, i-bio-technology, ukhathalelo lwempilo, ezemali kunye namayeza."
Umoya waseKorea kunye neDelta batyale imali eBoston, kwaye le nqwelo moya intsha iya eSeoul yongeza ikhonkco eliphambili ukuba amaqabane e-JV abonelela abathengi bommandla waseBoston. Ngaphaya kweSeoul, abahambi banokufikelela phantse kuyo yonke iAsia kuMoya waseKorea benamava awodwa kubathengi kwi-Incheon's Terminal 2 enonxibelelwano olusebenzayo nolungenamthungo kunye neelounges ezine ezintle zaseKorea, kunye nezinye iindawo zokulala ezinikezelwe ukudlulisa abakhweli kuzo zonke iikhabhathi ezinemvula eyongezelelweyo kunye neendawo zokulala .
Inkonzo yaseBoston-Seoul iya kuqhutywa kwinqwelomoya entsha yaseKorea Air engu-787-9 ye-Dreamliner enee-suites ezintandathu zokulala zokuqala, i-18 Prestige business class sleeper suites, kunye nezihlalo ezingama-245 kwiklasi yezoqoqosho.
Iklasi yokuQala inezinto zokutya zokubaleka ezifama kunye nokutya okulinywe kwifama yenqwelomoya e-Jeju Island, esweni esine-intshi ezingama-23 esinezigqibo eziphakamileyo, ezokuhonjiswa ngobunewunewu kunye neebhedi, impahla yokundithuthuzela ngenqwelomoya nguGianfranco Ferre, kunye neekiti zokunceda ezinophawu lweDAVI iimveliso ezintlanu ezahlukeneyo zokuthambisa. Abathengi beklasi yokuqala banokonwabela izibonelelo ezizodwa zelounge ezinikezelweyo yokutshekisha kunye negumbi lokuhlala kwigumbi lokuqala kwisikhululo senqwelomoya i-Incheon.
I-Korea Air's Prestige Suites inikezela ngezihlalo ezizimeleyo ezingama-intshi ezingama-21 ububanzi ezibekwe phakathi kwee-intshi ezingama-75 ngaphandle kokufikelela ngokuthe ngqo. Ngaphakathi, abathengi abadumileyo bonwabela inkqubo yokutya kunye newayini yaseKorea yomoya kunye neprimiyamu ye-DAVI.
Okwangoku, udidi loqoqosho lwaseKorea luphakathi kwezona ndawo zintofontofo kumzi mveliso, ine-intshi ezingama-33-34 phakathi kwezihlalo, i-10.6-intshi yokujonga isisombululo esiphakamileyo kunye neendlela ezahlukeneyo zokutya.
Ngokumiliselwa kweBoston neMinneapolis / iSt. UPaul, uKorea Air kunye noDelta baya kunikela ngeenqwelo moya ezingama-29 ngosuku phakathi kweendlela ezili-14 e-US naseAsia. Ukusuka eKorea kuphela, amahlakani adibeneyo aya kunika iinqwelomoya ezingaphezu kwe-115 ngeveki ukuya kwiindawo ezili-13 zase-US, ukonyuka okungaphezulu kwe-10% ukusuka ehlotyeni ngo-2018. Ngokudibanisa zombini iishedyuli zeenqwelomoya, abathengi banokukhetha okungahambelaniyo kokuhamba ngelixa bonwabela ukuphucuka kokuphindayo.
Iinkcukacha zeShedyuli zale nkonzo intsha zingezantsi, kwaye ukubhukisha kuvulwa kamva ehlotyeni.
Inkonzo yaseKorea yomoya engapheliyo phakathi kweBoston neSeoul:
IBoston 1:30 pm
Seoul 4:50 pm (ngosuku olulandelayo)
NgoLwesibini, ngooLwezithathu, ngooLwezihlanu, ngeMigqibelo, ngeeCawe
Iqala ngo-Epreli 12, 2019
Seoul 9:30 kusasa
I-Boston 10:30 kusasa
Utyalo-mali oluqhubekayo lwe-Delta eBoston luza kufikelela kwi-112 yohambo losuku oluphakamileyo nge-2018, ukunyuka kwe-19 yokuhamba xa kuthelekiswa nehlobo lase-2017 kunye ne-29 yokuhamba ehlotyeni ngo-2016. IDelta kunye namaqabane ayo bazakusebenza kwiindawo ezingama-52 ezipheleleyo ezivela eBoston, kubandakanya neendawo ezili-18 zamazwe aphesheya. Isibhengezo sanamhlanje senkonzo yaseSeoul kuMoya waseKorea izisa ukungagungqi kwengingqi nganye enkulu yokuhamba kumazwe aphesheya. UDelta uzibophelele ekuphuculeni amava abathengi eBoston, kwaye unikezela ngezihlalo zokuqala kwiklasi kunayo nayiphi na enye into ephethe iklasi yokuqala kuyo yonke inqwelomoya ngoJuni. I-Delta Sky Club isebenza kwiindawo ezimbini kwiTheminali A, ibonelela abathengi ngeendlela ezahlukeneyo zokutya ezinempilo kunye nokutya kunye nenani lezinto ezinokuthanani nokusela kubandakanya uSamuel Adams wobhiya wobugcisa kunye nekofu yeStarbucks. I-Delta ibonelela ngezihlalo ezipheleleyo zebhedi e-Delta One kuzo zonke iinqwelomoya eziya eYurophu, khetha iinqwelomoya eziya eLos Angeles nakuzo zonke iinqwelomoya eziya kwindawo yaseBoston engu-1, eSan Francisco.
Malunga noMoya waseKorea kunye neDelta Joint Venture
Ngama-27 eentsuku zokuhamba ngenqwelomoya phakathi kwe-US neAsia, intsebenziswano phakathi kweDelta kunye neKorea Air inikezela abathengi ngeenzuzo zokuhamba ezikumgangatho wehlabathi kwenye yezona ndlela zonxibelelwano zibanzi kwintengiso yeTrans-Pacific. Amaqabane asandula ukwandisa ikhowudi yokwabelana ngenqwelomoya kwaye ebutsheni balo nyaka bafumene imvume kurhulumente ngokudibana kwePacific okuya kukhulisa unxibelelwano phakathi kweMelika neAsia kunika abathengi ukhetho olungakumbi lokuhamba ngaphandle komthungo. Zombini iinqwelomoya nazo ziphucule iinkqubo zazo zokuthembeka, kubandakanya ukubanakho ukufumana iimayile ezingaphezulu kwezi nkqubo zombini kunye nokuzikhulula kwinethiwekhi eyandisiweyo.